निरोगी बच्चा जन्माउन के गर्ने, के नगर्ने ? - E ALL NEPAL
HomeAll PostsUncategorizedनिरोगी बच्चा जन्माउन के गर्ने, के नगर्ने ?
सुन्दर र स्वस्थ बच्चाको चाहना नराख्ने को होला ? वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका अधिकांश दम्पतीको एउटै सुन्दर सपना हुन्छ, स्वस्थ बच्चा जन्माउने ।तर, सबैले सोचेजस्तो र कल्पना गरेजस्तो बच्चा पाउन सकिरहेका छैनन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि केही परिवारमा रोगी र विकलांग बच्चाको जन्म हुने गरेको छ । कतिपय घरमा यस्ता बच्चाको जन्मले खुसी ल्याउन सक्दैन ।
बच्चा जन्माउन चाहने दम्पतीले अस्थायी साधनको प्रयोगकहिलेबाट छाड्ने भन्ने कुरा उनीहरुले प्रयोग गर्ने साधनका आधारमा भर पर्छ । सामान्यतया बच्चाको योजना बनाएका दम्पतीले तीन महिनादेखि नै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न छाड्नुपर्छ । पुरुषले कन्डमको प्रयोग छाडेको केही दिनमै स्वास्थ्य जाँच गरेपछि सहजै चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम गर्भको योजना बनाउन सक्छन् । तर, हर्मोनल औषधि जस्तै पिल, सुई प्रयोग गर्नेहरुले भने केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
पटक हेरियो: 37